एमालेको गम्भीर आरोपः मतदाता प्रभावित पार्न बजेट दुरुपयोग गर्न खोजियो - Naya Patrika
एमालेको गम्भीर आरोपः मतदाता प्रभावित पार्न बजेट दुरुपयोग गर्न खोजियो
शुरोजंग पाण्डे, काठमाडौं | बैशाख ०८, २०७४
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित गर्न सरकारले बजेट दुरुपयोग गर्न खोजेको भन्दै तत्काल रोक लगाउन निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले धमाधम आचारसंहिता उल्लंघन गरेको प्रमाण आयोगलाई बुझाउँदै एमालेको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले बजेट दुरुपयोग तत्काल रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको प्रमाण पेश गर्न संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल विहीबार आयोग पुगेको थियो । उनले आचारसंहिता उल्लंघनमा कडाईका साथ रोक लगाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि भूमिका खेल्न आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए । एमाले टोलीले बजेट निकासाका लागि पत्राचार गरिएको पत्र प्रमाणका रुपमा आयोगलाई बुझाएको थियो ।
पेश गरिएका आचारसंहिता उल्लंघनका चार प्रमाण
१.माओवादीका पूर्व लडाकूलाई वितरण गर्न प्रति व्यक्ति लाखौं वितरण गर्नका लागि अर्थमन्त्री र शान्तिमन्त्रीको संयोजनमा मन्त्रालयबाट
१ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा भएको छ, उक्त प्रकृया तत्काल रोकिनुपर्छ ।
२. खेलकुद मन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था नै नभएको शीर्षकमा जिल्ला–जिल्लामा करोडौं रकम निकासा गर्ने तयारी भइरहेको छ । रोल्पामा ५ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेकाले तत्काल प्रकृया रोकिनुपर्छ ।
३. अन्तर गाविस सडक परिचयोजना नयाँ शीर्षक अन्तर्गत करोडौं रकम धमाधम खर्च गर्न खोजिएको छ । रोल्पामा मात्रै १ सय १३ वटा परियोजनाका लागि रकम पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । गाउँ–गाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी रकम थमाउने कुरा स्वीकार्य छैन ।
४. विद्युत प्राधिकरणका अधिकृतहरुको सरुवाका लागि सहमति मागिएकाले निर्वाचन आयोगले कुनै हालतमा सहमति दिन मिल्दैन । अनुकूल अधिकृतहरुमार्फत गाउँमा पोल, ट्रान्सफर्मर, मिटरबक्स वितरण गरेर बिजुली ल्याउने भन्दै मतदाता प्रभावित पार्न खोजिएको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघनमा रोक लगाउनुपर्छ
सुवास नेम्बाङ, उपनेता, एमाले
निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोकिएकाले तपाईंहरुले यताउती गर्न सुझाव दिँदा मात्रै सरकारले मिति सार्ने हो । ३१ वैशाखमै निर्वाचन हुनुपर्छ । हामी निर्वाचन गराउन दृढतापूर्वक लागेका छौं । तर सरकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै मतदाता प्रभावित पार्न बजेट दुरुपयोगमा लागेकाले ध्यानाकर्षणका लागि आएका छौं । आयोगले तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।
तीन मन्त्रीलाई छानबिन गरिरहेको छ
डा. अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख आयुक्त, निर्वाचन आयोग
हामी ३१ वैशाखमै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छौं । त्यही अनुसार तयारीका सबै काम तीब्र ढंगले पूरा भइरहेको छ । तपाईंहरुले गराउनुभएको ध्यानाकर्षणमा आयोगको गम्भीर ध्यान गएको छ । यही सिलसिलामा ३ जना मन्त्रीलाई आयोगले छानबिन पनि गरिरहेको छ । आयोगले निष्पक्ष ढंगले काम गरेकोमा विश्वास गर्दै एमालेले कामका लागि थप सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छु ।